James ee Atletico wuxuu ku tiirsan yahay Madaxweynaha Real - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS James ee Atletico wuxuu ku tiirsan yahay Madaxweynaha Real
James ee Atletico wuxuu ku tiirsan yahay Madaxweynaha Real
Miguel Angel Gil Marin, oo ah madaxa guud ee kooxda Atletico Madrid, ayaa u sheegay ESPN in taageerayaasha Diego Simeone ay doonayaan inay saxeexaan qandaraas James Rodriguez laakiin heshiiska ayaa kuxiran madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez
. James, ilo wareedyo ku dhow Atletico ayaa u sheegay ESPN FC, xiddiga heerka caalami ee dalka Colombia inuu ku laabtay Madrid ka dib laba sano oo amaah ah oo uu joogay kooxda Bayern Munich. Si kastaba ha noqotee, magdhowgu weli waa la isku raacsan yahay ciyaartoygii degay Bernabue lacag dhan 80 milyan oo Euro oo ah 2014.
- Goorma ayuu bilaabmayaa xilli-ciyaareedyada La Liga ee 2019-20? 
“Ma dhihi karo [hadii James uu ka ciyaari doono Atletico iyo hadii kaleba) Derbi “Inta u dhaxaysa kooxda Real Madrid ee magaalada New York. Waan ogahay inay taageerayaasha Atletico jeclaan lahaayeen oo xitaa la hadli lahaayeen qaar ka mid ah ciyaartoydooda, waxay aamisan yihiin in James uu noo keeni doono tayo dheeri ah.
Waan ogahay in tababaraheena uu ixtiraamayo taas. Waan ogahay in James uusan dooneynin inuu sii joogo Real Madrid. Waan ogahay in Real Madrid aysan dooneynin inuu sii joogo. Laakiin waxyaabo badan waa inay dhacaan si ay suurtagal u noqoto. Laakiin waa run inay fiicnaan lahayd. "
Markii wax laga weydiiyay muddada macaamil xareynta, Marin wuxuu raaciyay: "Ma aqaan. Wax badan ayay kuxiran tahay maamulka Real Madrid iyo madaxweynaha. "
Kadib markii ay waqti badan ku bixiyeen xagaagan hubinta dadka yimid Eden Hazard Luka Jovic Ferland Mendy Eder Militao et Rodrygo Madrid ayaa raadineysa inay ka takhalusto qaar badan oo ka mid ah jilayaasha yar yar si lacag loogu uruuriyo.
Hadana, markii wax laga weydiiyay hadalada Marin, Zidane wuxuu yiri, "Waa arin kooxeed. Waa wax iyaga ka dhexeeya - madaxweynayaashu - aniga maahan. "
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/soccer-transfers/story/3906815/james-to-atletico-dependent-on-real-president
Kubadda Cagta OL - OL: Aulas wuxuu arkaa Everton oo lacag ka socota PSG, wuxuu siinayaa qiimaha - Olympique Lyonnais - FOOT 01
Ibrahimovic: Waxaan dareemayaa sida oo kale
Hindiya: Xildhibaan HC wuxuu shaaca ka qaaday kiisaska sharci darrada ah ee NSA ee NSAgal Wararka Hindiya
7 Noofambar 30 16h2019 Wargeys - VIDEO
Mexico U17 vs Brazil U17 - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 17 Noofambar 2019 - ESPN
Madaxtooyada IFF: Waa kan sababta kaliya seddex naadiyo 1 League ah uga jawaabeen baaqii Didier Drogba
Makkah (live): xujaajta ayaa yimid Carafaat si ay ula ciyaaraan Waqoof-e-Arafat - Live ka soo jeeda Arafat - VIDEO
DADKA & LIFESTYLE7,631
Video dheeraad ah3,508